Daawo Sawirada Dhacdo qal qal abuurtay oo ka dhacday meel u dhaw garoon ay ka socotay ciyaar adag. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Daawo Sawirada Dhacdo qal qal abuurtay oo ka dhacday meel u dhaw garoon ay ka socotay ciyaar adag.
Daawo Sawirada Dhacdo qal qal abuurtay oo ka dhacday meel u dhaw garoon ay ka socotay ciyaar adag.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 23-06-16 11:37 AM Ciidamada qalabka sida ee dalka France ayaa soo Saaray digniino laxiriira Mooto laga shakiyey oo ladhaigay irida laga Galo Stade de France oo ay ku dheelayeen dalalka Iceland vs Austria kulankii ugu dambeeyey ee Wareega Gruubyada koobka yurub.
Booliska ayaa kashakiyey mootada oo la dhigay meel aad ugu dhow irida weyn ee laga Galo Garoonka waxayna durba Xireen aagii oo dhan iyaga oo Taageerayaashii u weeciyey in ay Garoonka ka Galaan irdo kale kadibna waxaa si Taxadar leh loo baaray Mootada oo waxba laga waayey Markii danbe.
Afahyeen u hadlay booliska ayaa sheegay in ay Mar ku dhawaadeen in ay yeeriyaan Aramiga khatarta sheega kadib shaki badan oo ay kala kulmeen Mootada oo lagaran waayey cida leh Waxaana aan ku dhawaanay ayuu yiri in aan hakino Cayaarta inta laga sugayo Amniga Garoonka balse Markii dambe Xaalka ayaa caadi ku soo laabtay Cayaartiina waxa ay ku dhamaatay Jawi Nabad gelyo ah.